I-Implot Impact kunye nokubaluleka kwaBantu abakuGagner's Ring Cycle
Isiqendu kunye neNdawo yokuHlola
I-Woton yintloko yeothixo kunye nomgcini wezivumelwano kunye nezithembiso. Utshatile uFricka, unkulunkulukazi wendlu nekhaya.
I-Woton iqeshwe iziqhulu ezimbini, iFasolt kunye neFafner, ukwakha inqaba / indlu ebizwa ngokuthi iValhalla. Ukutshintshisa umsebenzi wabo, wathembisa ukubabanika udadewabo womfazi, uFreia. Ngelishwa, oku kwakuyisithembiso awazange afune ukuyigcina. UFricka uyacatshukiswa nomyeni wakhe ngokumnika udadewabo.
Njengoko iziqhwala ziza ukuqokelela umrhumo wazo, imiyalelo yeWoton Ukukhawulela ukufumana intlawulo evumelekileyo endaweni ye-Freia. Oku kubangela ukuba uLoge uxele iinqwelomba ezimbini zase-Alberich kunye neRheingold. Isithembiso samandla kunye nokukwazi ukuphunyuka kwiinkampani eziphangaleleyo zithanda oothixo, kuquka uWoton ngokwakhe. Ngaloo ndlela uqala ukhenketho lweziganeko ekugqibeleni ezikhokelela ekutshatyalaliswa kwehlabathi lonke, kuquka noothixo.
Kungathiwa yi-Woton ukunyanzela izinto [impahla yakhe], kunye nohanahaniso [ekuhloswe ukuba angagcini xa kuthethwa ukuba nguye owenza zonke iikontraka] ngokukodwa kubangelwa ukuwa kweothixo. Ngesigqibo sakhe esingenangqiqo sokubamba umthombo wakhe (kunye nabanye oothixo ') ukungafi kwindlu (eg, izinto eziphathekayo), uWoton wayenetyala njengo-Alberich ngokutshabalalisa ihlabathi.
Njengoko kuchazwe ngaphambili, uFricka unkulunkulukazi wendlu kunye nomfazi kunye ne-Woton. Naye udade kaFeya. UFricka unxusa umyeni wakhe, uWoton, ukuba athole indandatho emva kokuba efunde ukuba ingasetyenziswa ukugcina ethembekile. Kwi-Walk Walküre, nguFricka oxelela iWoton ukuba kufuneka avumele umtshato wamaHunding kuSieglinde ngokumelene neSiegmund. U-Woton unqabile ngenxa yokuba ukholelwa ukuba uSiegmund unokusindisa oothixo ngokubuyisela iRheingold; Nangona kunjalo, ukuba wenqaba ukukhusela iHunding, uya kulahlekelwa ngamandla akhe.
UFeya unika abanye oothixo ngamaapulo egolide aqinisekisa ulutsha lwawo lwaphakade namandla. Ukutshatyalaliswa kwakhe nguFafner kunye neFasolt emva kokugqitywa kweValhalla kukuphazamisayo koothixo, abaqala ukudala ngokukhawuleza. Ukuba ubukho bukaFreya abuyinto ebaluleke kakhulu ekusindisweni koothixo, iWoton kunye nenkampani kungenzeka ukuba ingena kwiinkathazo zokumhlangula.
UAlberich ubeka inqwelomba yonke iNtongo ngokulahla uthando kunye nokuthatha iRhinneold kusuka kumaRhinemaidens. Emva komntakwabo, i-Mime, ifake igolide ibe yinqaba yamandla amakhulu, u-Alberich uyabakhokela amanye ama-gnomes e-underworld (i-Nibelheim) aze abakhombise igolide kwi-treasury yakhe.
UAlberich ufumana isigqoko somlingo (i-Tarnhelm) evumela ukuba umntu onxibayo atshintshe isimo nesayizi. Ukugqithisa kunye neWoton behlela ephaseni baze bakhohlise u-Alberich ukuba aphenduke inqanaba, emva koko bawubambe isigqoko kwaye bamphoqe ukuba anike ubuncwane bakhe kwiFasolt noFafner. Uqalekisa isithintelo, esithi bonke abo banayo baya kuhlangana nomona nokufa ade abuyele esandleni sakhe.
Kwi-opera, i-Alberich imele i-archetype yamandla ibingendawo kwaye ingenalo uthando. Abanye abalobi batyhicilele umlingiswa wakhe njengohlobo lukaWagner lo "mYuda" olungendawo *.
UFasolt kunye nomntakwabo, uFafner, wakha uValhalla kwiWoton ngokutshintshana noFeya. Xa iWoton izame ukubuyela ngaphandle kwento leyo, yayinguFasolt eyayivumi ukuyivumela, ngenxa yokuthandana kwakhe nonkulunkulukazi wobutsha. Kwakhona iFasolt eyenqwenela ukwamukela ubutyebi buka-Alberich ngokutshintshana noFeya ngaphandle kokuba kwakwanele ukumfihla kumbono. Xa iWoton ekugqibeleni inika iindandatho kwiinqununu (ukugcwalisa isikhala eludongeni lwegolide olufihle uFeya), baqala ukulwa kwaye uFafner ubulala iFasolt.
* Uhambo lukaGottfried: UWagner ubhekene nelifa lakhe elibi, nguDaniel Mandel. Ishicilelwe kwipapasho ka-Julayi 2000 ye-AIJAC - i-Australia / i-Israel ne-Council Affairs Council.
UFafner ngu mzalwana waseFasolt, enye inqwelana eyakha iValhalla kwiWoton. KwakungumFafner owayekhalaza ukuba igolide kuphela ayifumanekanga kwi-Freya kuba wayesenokumbona emva kwodonga lobuncwane. Ufuna i-ring ye-Woton (ngubani obembethe kweli nqanaba). Emva kokuba u-Woton enikezela isandi, uFafner ubulala umntakwabo aze azithathele yena uKhayini noAbheli.
I-Woton ayikwazi ukuhlasela ngokuthe ngqo uFafner, okanye mhlawumbi umkhonto wakhe uya kuphulwa.
I-Fafner, ngoku ifom ye-dragon, iyakuthandwa nguWoton no-Alberich, kwaye yaxwayisa ukuba umntu uza kuza kumbulala. I-Fafner ihleka, ibuye ilale. Ngomso olandelayo, uSiegfried ugqiba ukugwaza uFafner entliziyweni kunye no-Nothung emva kokukhokelwa emqolombeni weMime. UFafner uyafa ngokukhawuleza, kodwa kungekhona ngaphambi kokumxwayisa uSiegfried ngomntu oye walungisa imfazwe.
I- Apocalypse Conspiracy * ithi la ndelayo malunga neenhlamvu zeFafner kunye neFasolt, "Bobabini abazalwana babonakaliswe ngokugqithisileyo kwaye ngamnye umele umbandela ohlukeneyo wabantu. Iyokuqala iya kuhambelana ne-toptop ka-1789, lowo uphuphayo ngobulungisa kunye nokulingana. Kule ndawo ye-idealist, imali ayinanto; Abafazi kunye nothando kuphela bafanele ukunika imizamo. Ngengqiqo eninzi, ubeka u-Wotan inceba yokuthandana nothando kunye nexabiso labasetyhini. Umntakwabo uFafner wayeya kubhalisa ngakumbi kwi-revolutionary ye-1791.
Iinjongo ziphazamisekanga ngokupheleleyo.
Ukuba ufuna ukuthatha uFrania, kukuphela kokunciphisa oothixo bama-apula egolide, ukubenza buthathaka, kungekho ndlela yokuwadla. Nguye oya kubongoza umnakwabo ukuba avume ngokutshintshiselana. "
Uthikazikazi womhlaba nomama weeNorns ezintathu, u-Erda uxwayisa iWoton ukuba aphelise indandatho emva kokuyithatha esuka e-Alberich. Kubonakala ukuba unokukwazi ukubona ikusasa kwaye unobulumko obukhulu; kwixesha elingaphezu kwesinye, sibona iWoton icela / ifumana iingcebiso kwi-Erda.
USiegmund uyindodana kaWoton, umzalwana wesibini / umthandi uSieglinde, noyise kaSiegfried. Emva kokuhamba ehlathini ubusuku bobunye, uSiegmund wangena endlwini kaSieglinde noHunding. U-Siemund noSieglinde bafumana ukukhangela ngokukhawuleza; nangona befunda ba mawele. Umyeni kaSieglinde utshela uSiegmund ukuba ahlale ubusuku, kodwa kusasa, uya kubulawa ngokukhawuleza.
I-Woton, ephoqelelwe nguFricka ukukhusela amalungelo omtshato kaHunding, ibhubhisa ikrele likaSiegmund emva koBrnnhilde wenqaba imiyalelo yakhe. U-Siegmund ukhawuleza wabulawa nguHunding (obulawa ngumtsalane wesandla sikaWoton kungekudala emva koko). Nangona kunjalo, uSiegmund noSieglinda bakwazi ukulala ngobusuku obunye bethando, obangela ukuzalwa kukaSiegfried.
Umfazi waseHunding, intombi kaWoton, udadewabo / umthandi weSiegmund kunye nonina kaSiegfried. Ugcinwa nguBrnnnhilde, osifihla kufuphi nomqolomba kaFafner. Wathatha iinqumle zekrele likaSiegmund, eliza kusebenza emva koko ngunyana wakhe, uSiegfried.
UBrnnhilde yiyona nto intombi yeWoton, kunye neValkyrie. Ekuqaleni u-Woton uyalelwa ukuba avikele uSiegmund, kodwa unyanzelekile ukuba atshintshe amacandelo xa uFricka ekhumbuza iWoton ukuba kufuneka uvikele izibhambathiso zomtshato zikaHunding. Uthoba imiyalelo kayise, kunye nokulahlekelwa kwakhe kukungafi njengesijeziso.
Ekugqibeleni ugqatshana uSiegfried, owamnika indandatho emva kokubulala uFafner kunye nekrele eliphinda lenziwe. Udadewabo kaBrünnlde, uWaltraute, uxwayisa ukuba uyise wabo u-Woton uthi oothixo baya kutshabalaliswa ngaphandle kokuba ebuyisele iRhinemaidens, kodwa uBrnnhilde uthando olutsha ngoSiegfried lubaluleke ngakumbi kuye kunokuba unxungule oothixo. Uyenqaba ukulahla indandatho, kwaye iWaltraute igibela ngaphandle.
U-Siegfried ubuyela eBrnnhilde, eguqulwa yiTarnhelm kwiFomu likaGunther. Iinyembezi zenza i-ring and steal her as Bride's Bride.
Kamva, xa uSiegfried wayekhohlisa kwaye wayekhohlisile (wayengenakwazi ukuba wayephantsi kwamandla omlingo), uchaza ukuba uSeeegfried unobuthathaka-umkhonto owawugxotha emhlane wakhe wawuya kufa. UHaren, eqinisweni, uyayisebenzisa le nto kwaye uyambulala.
Xa umyeni wakhe ebulawa, uBrnnhilde ucinga ukuba oothixo babhekene nokufa kukaSiegfried, aphinde athathe i-ring, aze afunge, uya kuphinda ahlale kwiRhinemaidens. Uyawubeka, ubeka i-pyre yamangcwaba emlilweni, aze aqhube emlilweni (kodwa kungekafiki ngaphambi kokuyalela amaqhekeza kayise ukuba axele uLoge ukuya kuValhalla ngenxa yokuwa kweothixo). Ihlabathi liyatshisa, oothixo bachithwa, kwaye iRhinemaidens iphinda ibuye negolide.
* http: //ring.mithec.com/eng/whomime.html - Uvimba obalulekileyo oquka uhlalutyo lwabalandeli kunye neziganeko.
Umama ungumzalwana ka-Alberich. KwakuyiMime eyakha i-ring ye-Rhinegold kunye neTarnhelm. Wayenethemba lokusebenzisa uTarnhelm ukuphazamisa umntakwabo aze abuyisele umva. Kwakhona i-Mime eyifumene uSiegfried ehlathini njengoko uSieglinde wayefa, wamvusa, kwaye kamva ezama ukuloba ikrele ngenxa yakhe engenakuphulwa. Wayeyigcine iinqununu zeNothung (ezinikezelayo njengobungqina bendali lakhe), kodwa akanalo ukukwazi ukuvuselela ikrele.
Kamva kwimbali, i-Mime igxeka intloko yakhe malunga neWoton eguguleyo.
I-Woton iphumelela, ishiya umntu "ongenalo ukwesaba", ukubulala iMime (Kakade, siyazi ukuba nguSiegfried). Njengokuba kunjalo ngomntakwabo u-Alberich, iMime ilindele ukuphazamisa uSiegfried aze abuyisele indandatho ukuze athole ukulawula umhlaba kunye namandla angaphezulu. Ubulawa nguSiegfried emva kokuzama ukumnika isiselo esinetyhefu.
Umyeni kaBrnnnhilde (okwenza uWoton umkhulu wakhe kumacala omabini), kunye nonyana kaSiegmund noSieglinde. U-Siegfried yiqhawe lebali, nangona sihlala simbona ekhohlisiwe kwaye ephathwa ngabantu abanjengeMime, Hagen no-Gunther. KwakunguSiegfried owabamba u-Nothung emva kokuba uMime avume ukuba wayengenako amandla kwaye wasebenzisa ukubulala iFafner. Wanikela indandatho kuBrnnnhilde, owathi wenqaba ukuyibeka nangona kunengcebiso yokwenza njalo.
U-Siegfried ekugqibeleni wabulawa emva koBrnnnhilde, ekholelwa ukuba wayengathembekanga, ubonakalisa ubuthathaka kuHagen. Emva kokufumanisa ukuba uSiegfried ukhohlisiwe, u-Brünnhilde uvutha umzimba wakhe, ngokwakhe, nakwezinye ihlabathi (ngokunikezelwa kwemali ukutshisa i-Valhalla).
Ukuqeshiswa ngumnquli womlilo ekugqibeleni ubuyela kwifom yequmrhu lakhe kwaye libhubhisa yonke into (ndiyifumana into enomdla ukuba ekuqaleni, Loge mutters umnqweno wakhe wokukwenza oku nje). E-Das Rhinegold, iWoton ilindele ukufika kweNgxowa, enethemba lokuba uya kuba nobulumko bokufumana uothixo oyintloko emdeni wakhe kunye neziqhwala, ezibonisa uhlobo oluthile lobulumko. Kwakhona kwakuqeshwe ukuba ngubani ocebisa oothixo beba igolide, njengokuba u-Alberich wenza. Kwakungumngcwabo okhohlisa u-Alberich ukuba aguquke abe yidenki aze atshe iTarnhelm. Ukukhangela kwakha umjikelo womlilo ojikeleze iBrünnhilde.
Ingumlingisi womgubo omele amandla okucoca umlilo. Uyingxowankulu ngqo yobudlelwane bakaWagner kunye nokunyaniseka kweBakin, owakhuthaza le ngcamango yokutshisa ukusekwa. Impembelelo yeBakunin iya kuxutyushwa kamva kwisicatshulwa.
Umntakwabo u-Gunther noGutrune. Ungunyana ka-Alberich. Ngomgudu wokufumana ukulawulwa kwendandatho, uyaqinisekisa ukuba abantakwabo basebenzise imilingo yokutshata uBrnnhilde noSiegfried ngokwabo. Bafumana ngamnye umtshato; ufumana ulawulo olupheleleyo lwehlabathi. KwakunguHagen owamqinisekisa uGunther ukuba amncede abulale uSiegfried. UHagen ubulala uGreenther kwiingxabano emva kokuba uSiegfried abulawe.
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba ngamnye wabalinganiswa obalulekileyo wayenalo isandi ngexesha elinye, kwaye ngamnye wenqaba ukuyibuyisela kubanikazi bayo abafanelekileyo. Nangona u-Alberich wayengowokuqala ukuba igolide, sibona ukuziphatha okufanayo kubalinganiswa njengeWoton, Brünnhilde, kunye ne "hero" uSiegfried. Kungenzeka ukuba uWagner wayethetha ukuba bonke batyala kwaye, ngenxa yoko, bafanelwe isijeziso esiza ekupheleni.
Isiqendu se-Il Trovatore
UNessun Dorma nguPararotti
I-Synopsis ye-Bizet's Opera, "uCarmen"
UDon Pasquale I-Synopsis
Giulio Cesare Isiqendu
Ukubaluleka komgaqo-nkqubo waseMzantsi Afrika
I-Rosh Hashanah kunye ne-Yom Kippur
Ukuqonda iMpawu zeTekisi kwiNgxelo engeyiyo
Iintsingiselo ezimbini zokuthi 'UkuQala kuqala' eGoli
I-Celtic Cross Spread
Iintlobo zokuzaliswa koBuntu
Iimpawu zeeQarari - I-Archaeological Study of Quarries zakudala
Izigaba eziMithathu zeMbali yezoBuchule kunye nendlela abahluke ngayo
I-Miocene Epoch (i-23-5 Million Years Ago)
Leo kunye nePisces Uthando olufanelekileyo